Amagosa amakhulu ePalamente kunye nendlela abaSebenza ngayo
Iintlobo zamaRhulumente ePalamente kunye nendlela abaSebenza ngayo
Urhulumente wepalamente yinkqubo apho amagunya eekomiti ezilawulayo kunye nezomthetho zidibeneyo ngokuchasene nokuba zikhethwe ngokwahlukileyo njengetshektshana malunga nomnye nomnye amandla , njengoko abaBawo abasunguli baseUnited States bafuna uMthetho-siseko wase-US. Enyanisweni, isebe elilawulayo kwirhulumente wepalamente lithatha amandla alo ngokuthe ngqo kwisebe lomthetho. Kungenxa yokuba igosa eliphezulu likarhulumente kunye namalungu eKhabhinethi akhethwe ngabavoti, njengoko kunjalo kwindlela yokongameli eMelika, kodwa ngamalungu epalamente.
Oorhulumente bamapolisa baqhelekile eYurophu naseCaribbean; nazo zixhaphake kakhulu emhlabeni jikelele kuneendlela zikaRhulumente zorhulumente.
Yintoni eyenza uRhulumente wePalamente ahluke
Indlela eya kutyunjwa ngayo intloko ka rhu lumente yinkqubo ebalulekileyo phakathi kolawulo lwepalamente kunye nenkqubo yomongameli. Intloko yeburhulumente wepalamente ikhethwe liSebe lezomthetho kwaye liphethe isihloko se-prime minister, njalo kunjalo kwi- United Kingdom naseKhanada . E-United Kingdom, abavoti bakhetha amalungu eBritish House of Commons yonke iminyaka emihlanu; iqela elisebenzela ininzi lezihlalo kwaye likhetha amalungu ekomiti yegqebethi yesigqeba kunye nongqongqoshe. Inkulumbuso kunye nekhabhinethi yakhe isebenza njengoko nje umthethosisekelo unethemba lawo. ECanada, inkokheli yeqela lezopolitiko elifumana izihlalo ezininzi ePhalamende liba ngumbongameli.
Ngokuthelekiswa, kwinkqubo yomongameli njengaleyo e-United States, abavoti bakhetha amalungu eCongress ukuba bakhonze kwisebe lomthetho likarhulumente kwaye bakhethe intloko ka rhu lumente, ngokwahlukileyo. Umongameli kunye namalungu eCongress bakhonza imiqathango engagxininci kwintembeko yabavoti.
AbaMongameli banqunyelwe ukukhonza imiqathango emibini , kodwa akukho mida imida yamalungu eCongress . Enyanisweni, akukho ndlela yokususwa kwelungu leNgqungquthela, kwaye nangona kukho imigqaliselo kuMgaqo-siseko wase-United States ukususa umongameli ohleliyo kunye nokuchitshiyelwa kwesi- 25 - akuzange kubekho umphathi-nqununu okhutshwe kwi-White KwiNdlu .
URhulumente wePalamente njengeNyango yokuBambisana
Ezinye izazi zezombusazwe ezivelele kunye nababukeli bakaRhulumente abakhathazekayo kwinqanaba leqabane kunye ne-gridlock kwezinye iisistimu, ngokugqithiseleyo e-United States, baye bacebisa ukuba kwamanye amaqela karhulumente wepalamente anganceda ukuxazulula ezo ngxaki. I-University of California yaseRichard Richard L. Hasen yaphakamisa imbono ngo-2013 kodwa yaphakamisa ukuba utshintsho olunjalo alufanele lwenzeke lula.
Ukubhalwa kwi-"Dysfunction Political and Change's Change," uHasen wathi:
"Ukubambisana kwamasebe ethu ezopolitiko kunye nokungahambelani nesakhiwo sethu sikarhulumente siphakamisa lo mbuzo oyintloko: Ngaba inkqubo yezopolitiko yaseUnited States iphukile kangangokuthi kufuneka sitshintshe uMthetho-siseko we-United States ukuba senze inkqubo yepalamente njengendlela ye-Westminster njengase-United Kingdom okanye yindlela eyahlukileyo yedemokhrasi? Ukunyuka okunjalo kuburhulumente obumbeneyo kunokuvumela amaqela eDemocratic Republic okanye eRiphabliki ukuba enze ngendlela ehambelanayo yokuphinda isicwangciso socwangciso malunga nokulungiswa kohlahlo lwabiwo-mali kwezinye iimeko. Abavoti banokubamba iqela ngamandla ekuphenduleni ukuba iiprogram ezixhomekeke kuzo zikhethiweyo. Kubonakala kuyindlela engqiqo yokuhlela uphuhliso lwezopolitiko kwaye iqinisekisa ukuba ngalinye iqela liya kuba nethuba lokubonisa iqonga layo kubavoti, ukuba iqwalaselwe kulo, kunye nokuvumela abavoti ukhetho oluzayo ukuba baphumelele ngendlela elifanelekileyo ngayo iqela lizwe.
Kutheni amaPalamente ePalamente angenza ngakumbi ngakumbi
UWalter Bagehot, intatheli yaseBrithani kunye nencoko yeendaba, wachaza inkqubo yepalamente emsebenzini wakhe we-1867 Umgaqo-siseko wesiNgesi . Ingongoma yakhe eyintloko kukuba ukuhlukana kwamagunya karhulumente kwakungekho phakathi kwamagatsha alawulayo, asemthethweni kunye namagqwetha oorhulumente kodwa phakathi kokuthi "uhloniphekileyo" kunye "nokusebenza kakuhle." Isebe elihloniphekileyo eUnited Kingdom lalibukumkani, ukumkanikazi. Isebe elisebenzayo lalingumntu wonke owenza umsebenzi wangempela, evela kwinqununu kunye nekhabhinethi yakhe ukuya kwiNdlu yeeNgingqi. Ngaloo ndlela, inkqubo enjalo inyanzelekile ukuba intloko ka rhu lumente kunye nabamthetho-mthetho baxoxisane nomgaqo-nkqubo kwizinga elifanayo, kwinqanaba lokudlala endaweni yokubamba i-prime minister ngaphezu kwe-fray.
"Ukuba abantu abafanele benze lo msebenzi abafani naleyo kufuneka benze imithetho, kuya kubakho impikiswano phakathi kweesethi ezimbini zabantu. Imirhumo-irhafu iqinisekisile ukuxabana nabathengi. I-executive executive is disabled for not getting the laws it needs, kwaye ipalamente ichithelwa ngokusebenza ngaphandle koxanduva; isigqeba sichasene negama layo kuba singenakuphumeza oko kuthatha isigqibo: i-legislature iyachithwa yintetho, ngokuthatha izigqibo abanye (kunye nabo ngokwabo) baya kubandezeleka. "
Indima yamaqela kwiRhulumente wePalamente
Iqela elinamandla kwiphondo yepalamente lilawula i-ofisi ye-nkulumbuso kunye nawo onke amalungu eKhabhinethi, ngaphezu kokubamba izihlalo ezaneleyo kwisebe lomthetho ukupasa umthetho, kwimiba enzima kakhulu. Iqela eliphikisayo, okanye iqela elincinci, kulindeleke ukuba libe nesigxina ekuchaseni phantse yonke into eyenziwa yinkoliso yamaninzi, kodwa ke ayinamandla okunciphisa inkqubela yabalingani babo ngaphesheya kwendlela. EUnited States, iqela lingakwazi ukulawula zombini izindlu zeCongress kunye neNdlu eNtshonalanga kwaye kusenakukwazi ukufeza okuninzi.
U-Akhilesh Pillalamarri, uhlalutyo lwamazwe ngamazwe, wabhala kwi- National Interest :
Inkqubo yepalamente inqwenelekayo kwinkqubo yomongameli. ... Inyaniso yokuba inkulumbuso inikwe uxanduva kumthetho wowiso-mthetho yinto entle kakhulu kulawulo. Okokuqala, kuthetha ukuba ulawulo kunye noorhulumente wakhe unengqondo efana neninzi yamalungu omthetho, kuba i-prime ministers bavela kwiqela elininzi lwezihlalo epalamente, ngokuqhelekileyo. I-gridlock ebonakala eUnited States, apho umongameli ekhethekileyo kwindibano kuninzi yeCongress, kuncinci kakhulu kwinkqubo yepalamente. "
Uluhlu lwamazwe kunye noRhulumente weePalamente
Kukho amazwe angama-104 asebenza ngaphantsi kweendlela ezithile zorhulumente wepalamente.
Alibhaniya ECzechia Jersey ISaint Helena, i-Ascension, noTristan da Cunha
Andora Dominikha Jordan Seyint Kitsi neNevis
Angwila Dominikha Khosovo Seyint Lushiya
Antiguwa neBarbuda Estoniya Khirgizstan Saint Pierre noMiquelon
Armeniya Yuthophiya Lathviya Seyint Vinsent neGrenadins
Arubha IFalkland Islands Libhanon Samowa
Ostreliya Faroe Islands Lesotho Sen Marino
Ostriya Fiji Masedoniya Sebhiya
Bahamas Finlend Maleyishiya Singapho
Bhangladeshi IFrench Polynesia Maltha Sint Maarten
Bharbhados Jemani Morishiyasi Slovakiya
Bheljiyam Gilbhraltha Moldova Sloveniya
Bheliz Grinlend Montenegro Isiqithi saseSolomon
Bhermuda Grenada Montserat Somaliya
Bhozniya neHerzegovina Guernsey Morokho Mzantsi Afrika
Botswana Guyana Nawuru Speyin
Iziqithi zaseBritish Virgin Hangari Nephal Swiden
Bhulgariya Ayisilend elamaDatshi Tokelawu
EBurma Indiya Caledonia entsha Thrinidadi neThubhago
Cabo Verde Irakh Nyu Zilend Thunishiya
Khambodiya Ayalend Niue ikarikuni
Norowe ETurks naseCaicos Islands
Isiqithi saseKheyman Sirayeli Phakistan Tuvalu
Isiqithi saseKhuk ElamaTaliyane Gini eNtsha yasePapuwa iunited Kingdom
Khroweyishiya Jameyikha Isiqithi sasePhitkhayin Vanuwata
Curacao Japhan Pholend
EWallis nase Futuna
Uhlobo oluthile lweePalamente
Kukho ngaphezu kwesahlulo sesibini kwiintlobo ezahlukeneyo zoorhulumente bepalamente. Zisebenza ngokufanayo, kodwa zihlala zineentlobo ezahlukeneyo zeentlangano okanye amagama ezikhundla.
IPhabliki yasePalamente: Kwiphabliki yasephalamende, kukho umongameli kunye nongunkulumbuso, kunye nepalamente esenza njengomzimba ophezulu. I-Finland isebenza phantsi kwiphabliki yasephalamende. Inkulumbuso ikhethwe yiphalamende kwaye isebenza njengentloko ka rhu lumente, isikhundla esinoxanduva lokulawula imisebenzi yee-arhente kunye namaSebe amaninzi. Umongameli ukhethwa ngabavoti kwaye uyongamela umgaqo-nkqubo welizwe langaphandle kunye nokukhusela kazwelonke; ukhonza njengenhloko yombuso.
Idemokhrasi yePalamente: Kule fom karhulumente, abavoti bakhetha abamele abakhethiweyo rhoqo. Enye yeentlanga ezinkulu ze-parliament yi-Australia, nangona isikhundla sayo sihlukile. Ngelixa i-Australia ilizwe elizimeleyo, likwahlula ubukhosi kunye ne-United Kingdom. U-Elizabeth Elizabeth II ukhonza njengentloko kaRhulumente, kwaye umisela igosa-jikelele. I-Australia nayo ine-nkulumbuso.
Ipublic republic of parliament: Kule fom karhulumente, i-prime minister isebenza njengentloko ka rhu lumente; ukhethwa ngamaphalamende kumanqanaba kazwelonke nakwaseburhulumenteni, njengenkqubo e-Ethiopia.
Intando yesininzi yaseburhulumenteni: Kule fom karhulumente, iqela elinommeli omkhulu lilawula urhulumente kunye ne-ofisi ye-prime minister. KwiCanada, umzekelo, iPalamente yenziwe ngamacandelo amathathu: iNkundla, iNtloko kunye neNdlu yeeNgingqi. Ukuze ibhaso-mthetho ibe ngumthetho, kufuneka iqhutywe ngokufundwa kathathu elandelwa yi-Royal Assent.
Intando yesininzi ye-parliament: Ukufana nentando yenkululeko yepalamente; Ukwahlukana kukuba iintlanga ezisebenzisa le fomu karhulumente zihlala zikholoni zenye, ilizwe elikhulu. Ngokomzekelo i-Cook Islands, isebenza phantsi kwedemokhrasi ye-parliament; Iziqhingi zaseCook zaseNew Zealand kwaye ngoku zibizwa ngokuthi "inkululeko yamazwe" kunye nesizwe esikhulu.
Ubukhosi bomgaqo-siseko wePalamente: Kule ndlela ka rhu lumente, inkosi isebenza njengentloko yombuso. Amagunya abo aphelelwanga; amandla okwenene kummandla wephalamende wephalamende uhlala kunye nongqongqoshe. UBukumkani baseUnited Kingdom ngumzekelo omhle wale fomu karhulumente. UMongameli kunye nentloko karhulumente e-United Kingdom ngu-Queen Elizabeth II.
Umbuso waseburhulumenteni wephalamende waseburhulumenteni: Kwimeko ephela yolu rhulumente, iMalaysia, inkosi ikhonza njengenhloko yombuso kunye nentloko-nkulu isebenza njengentloko ka rhu lumente. UMongameli uyinkosi ekhonza "njengombusi omkhulu" welizwe. Iindlu zombini zepalamente ziqulethwe okhethiweyo kunye nomntu ongakhethiweyo.
Ukuxhomekeke kwintando yeninzi yePalamente: Kulo hlobo lurhulumente, intloko ka rhu lumente ikhetha igosa likarhulumente ukuba lijongise igatsha elilawulayo lelizwe elixhomekeke kwilizwe lakubo. Irhuluneli yintloko yekarhulumente kunye ne-khabhinethi enqunywe yiNkulumbuso. Ipalamente iyonyulwa ngabavoti. IBermuda ngumzekelo omnye wokuxhomekeka kwentando yenkululeko yepalamente. Iarhuluneli yayo ayikhethiweyo ngabavoti kodwa yonyulwe ngu-ukumkanikazi waseNgilani. I-Bermuda yintsimi engaphandle kwe-United Kingdom.
I-World Factbook , iCentral Intelligence Agency
IPalamente kunye noRhulumente , uRhulumente we-United Kingdom
Iimfuno zeMelika kwiPalamente , Inzala kaZwelonke
Kuphela abantu abanokuguquka
Indlela yokongeza Umhla okanye iSitampu seXeshana kwiDatabase ye-Access 2007
Umzobo weNzululwazi kwiProse and Poetry